မီးလေးရဲ့ ချစ်သားလေးနှင့်အတူ :)
Posted by flowerworld at 6:30 PM 1 comments
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ မီးလေးရဲ့သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်
Posted by flowerworld at 10:34 AM0comments
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ လုပ်စားပြီး အဆီရစ်နေရင်းနဲ့ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအလွယ်ချက်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် :P :P
(၁) ကြက် ပေါင်သား ၃ခြမ်း
(၂) ပဲဝါခြမ်း နို့ဆီဗူး ၁ဗူး
(၃) ခေါက်ဆွဲခြောက် ၁စည်း
(၄) အုန်းနို့ နို့ဆီဗူး ၁ ဗူး
(၅) ကြက်သွန်နီဥသေး ၅
(၆) ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီး ၂မွှာ
(၇) ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
(အစပ်ကြိုက်ရင်တော့ ၃ ဇွန်းထည့်ပါ)
(၉) ငါးပိစိမ်းစား လက်တစ်စစ်ခန့်
(ဟင်းလေးအောင်လို့ပါ မထည့်လဲရပါတယ် )
(၁၀) ဆား/ ဟင်းခက်မှုန့်/ နံနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်ဆီ နှင့်
(၁၁) ဆီ / နံနံပင်/ ပဲသီး/ သံပရာသီး တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
(၁) ဟင်းမချက်ခင် ပဲတွေကိုရေ ၃နာရီလောက်စိမ်ထားပေးပါ။ ခေါက်ဆွဲကိုပြုတ်ထားပါ။ ပဲပြုတ်ထားပါ။ ကြက်သားတွေကို အနေတော်တုံးပေးပါ ပြီးရင် ဆားနဲ့နံနွင်းမှုန့်နဲ့နယ်ထားပေးပါ ကြက်သွန်နီ/ဖြူ / ဂျင်း / ငရုတ်သီးမုန့်ရောထောင်းပေးပါ အနေတော်ဖြစ်ရင် ငပိစိမ်းစားကိုရောထောင်းလိုက်ပါ။
(၂) ဒယ်အိုးတည် ဆီထည့်ပြီး ဆီပူလာရင် ထောင်းထားတာတွေကိုဆီသတ်ပါ နံနွင်းမုန့်နည်းနည်းထည့်ပေးပါ ဆား ဟင်းခက်မှုန့်ထည့်ပါ။ အရောင်နီပြီးဆီပြန်လာရင် ကြက်သားထည့်မွှေပါ အိုးကပ်လာရင်ရေလောင်းထည့်ပြီးဆက်တည်ထားပါ ။
(၃) ပြုတ်ထားတဲ့ပဲတွေကိုထောင်းပေးပါ။ ကြက်သားအိုးဆီပြန်လာရင်တော့ ထောင်းထားတဲ့ပဲတွေကို ထည့်လိုက်ပါ ဆူလာရင်တော့ မီးမှန်မှန်နဲ့တည်ထားလိုက်ပါ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့ အုန်းနို့ တစ်ဝက်လောင်းထည့်ပြီး အပေါ့အငံမြည်းပါ ။ ဟင်းအဆင်ပြေလို့ ချခါနီးကျရင် ကျန်တဲ့အုန်းနို့တစ်ဝက်ထက်ထည့်လိုက်ပါ ၅မိနစ်လောက်ကြာကြာတည်ထားပေးပါ ။
(၄) စားခါနီးကျရင်တော့ နံနံပင် ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ သံပရာသီးလေးညစ်ပေးလိုက်ပါ။
Posted by flowerworld at 5:34 PM0comments
မီးလေး ဘ၀ရဲ့အချစ်ဆုံး ကောင်လေးတစ်ယောက် ( love u so much my son )
Posted by flowerworld at 7:39 PM0comments
Marry You...My Love
Posted by paingminoo at 1:09 PM 1 comments
For my love, ma gyi .... Mg!
မောင်အရမ်းချစ်ရတဲ့ မကြီး ရေ... မောင့်ရင်ထဲမှာ ခံရခက်ဆုံးဝေဒနာတွေ ဖြစ်နေတာ ပြောမပြတတ်အောင် ပါပဲ.... လူတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို လျစ်လျှူ ရူ့ မိတာမဟုတ်ရပါ မောင့်ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ မကြီးကို မောင် လျစ်လျူမရူ့ ရက်ပါဘူး....မောင့်နားမှာ နေချင်တဲ့ မောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ မကြီးကို မောင် အရမ်းလိုက်လျော ပေးချင်နေမိတယ်....မကြီးပျော်ရွှင်နေတာတွေ ရီမောနေတာတွေ စိတ်ချမ်းသာနေတွေပဲ မြင်ချင်နေမိတာ....မောင် အရမ်းချစ်မိသွားတာ .....
နေ့ရက်တွေက ကုန်တာမြန်လိုက်တာ နော်..... အပြစ်လုပ်ထားခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို အပြစ်ရှိမှန်းသိရက်နဲ့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့ မကြီးရဲ့ ချစ်ခြင်းမောတ္တာကို မောင်လေးစားမိတယ်...မောင့်အတွက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ထိခိုက်အောင် လုပ်တာ မကြီး ကိုယ် မကြီးထက် မောင့်ကို ပိုချစ်လို့ဆိုတာ ကိုသိရတော့ မောင့်ကိုယ်မောင် သေချင်လောက်အောင် စိတ်နာမိပါတယ်.... မောင် မှားခဲ့ပါပြီ...ချစ်ရယ်....။
အတူနေကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချထားခဲ့ကြတယ်....ကြိုးစားကြမယ်လို့ ကတိတွေ ပြုခဲ့ကြတယ်....ချစ်လာလိုက်ကြတာ တစ်ယောက် ကိုတစ်ယောက် ရူးမတတ်ပါပဲ.... ခွဲခွာခြင်းက အရမ်းကိုခါးသီးလွန်းသလို ချစ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ဂရုမစိုက်မူ့ စွန့်ပစ်မူ့တွေက ပိုပြီးတော့တောင် နာကျင်စေပါတယ်....မောင် မကြီးကို နာကျင်စေခဲ့တယ်....စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ပေးမိခဲ့တယ်....လေ မောင့်မှာ ကြီးမားတဲ့ အပြစ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့မိပြီ...။
မောင်အရမ်းလွမ်းနေတယ်....မောင့်ရဲ့ ရက်စက်မူ့ တွေကို ခါးစည်းခံစားရင်း မကြီးနာကျင်နေပြီလား...တွေးရင်း မောင် အရမ်းဝမ်းနည်းပြီး ငိုမိပါတယ်..... မောင့်မျက်ရည် တွေက မကြီးအတွက် ပူလောင်ပြီးမှ ကျခဲ့ရတာ....မောင့်အတွက် မကြီး ကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေကို မောင်စာနာမိပါပြီ..။ မကြီးနားမှာ အချိန်တိုင်းရှိချင်ခဲ့တာပါ...ခဏလေးတောင် မခွဲ နိုင် ကြတာ....ပဲလေ 'ကိုယ်တွေ့ကြုံမှ နောင်တရတယ်' ဆိုတဲ့ စကားပုံက မောင်ပါပဲ...။
ချစ်သူတိုင်း အတူနေချင်ကြတယ်နော်...သစ္စာတရားကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ထင်ရာစိုင်းခဲ့တဲ့မောင့်ကို မကြီးက ချစ်ခြင်းမောတ္တာနဲ့ လမ်းပြပေးခဲ့တယ်.... မောင်နားလည်တတ်ခဲ့ပါပြီ.... မောင့်လိုလူတစ်ယောက် ဟာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အသုံးမ၀င်တော့သလို မကြီးရဲ့ မောတ္တာတရားကိုစော်ကားမိလို့ ဒုက္ခရောက် ခဲ့ပါပြီ... မောင် လေ..မကြီးကို သိပ်ချစ်တယ်.... မကြီးအတွက် စိတ်ပူနေမိတယ် အရမ်းစိုးရိမ်တယ်...မောင် ရူးတော့မှာပဲ ..ချစ်ရယ်.....။
မောင့်အတွက်ဆို ဘာမဆို မငြီးမငြူ အပြုံးလေးတွေနဲ့ လိုက်လျောကြည်ဖြူစွာ ဖြည့်စည်းပေးတတ်တယ်နော်....ရင်ထဲမှာ နာကျင်နေတာတောင်မှ မောင့်မျက်နှာညိုးမှာစိုးလို့ မောင့်အတွက် အပြုံးလေးတွေနဲ့ စကားလေးတွေကို ညင်သာစွာပြောပေးခဲ့တယ်...မကြီးရယ်...မောင့်အတွက် မကြီးက တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ မောတ္တာ ရှင်တစ်ယောက်ပါပဲ....မကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးလေ....မောင် မကြီးရဲ့ ဘ၀ ပါဆိုတာကို ရင်နင့်စွာ ကျေနပ်မိတယ် နောင်တရမိတယ်...။
မကြီးရဲ့ စိတ်ထဲ အတွေးတွေထဲမှာ မောင့်ကို ချစ်တဲ့စိတ်တွေ ပျော်ဝင်နေတယ်....မခွဲနိုင်အောင် ချစ်ခဲ့တယ်....မကြီးရဲ့ အပြုံးတွေ စကားလေးတွေက မောင့်ကို အား ဖြစ်စေခဲ့တယ်... မောင် စိတ်ကောက် စိတ်ဆိုးတိုင်း မောင့်နားကနေမခွာပဲ စိတ်ရှည် အောင်ချော့ခဲ့တယ်...အကြာကြီးစိတ်မကောက်နိုင်လောက် အောင် မကြီးရဲ့ ရင်ထဲက စေတနာတွေက ကြီးမားလိုက်တာ....မောင့်အပေါ် မကြီးလောက် ကောင်းမဲ့သူ ရှိပါဦးမလား....မောင် ...၀မ်းနည်းမိတယ်....။
ချစ်ခဲ့ကြတာ နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီ....သံယောဇဉ်တွေလဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရစ်နှောင်ခဲ့ပြီ....မောင် မတောင်းဆိုရပါပဲနဲ့မောင့်အတွက်ဖြည့်စည်း ပေးနေလိုက်တာ.....မောင့်အတွက်များ မကြီးမွေးဖွားလာခဲ့သလား ချစ်ရယ်....တွေးရင်း မောင်နှလုံးသားတွေ နာကျင်နေရပါတယ်...မောင့်အပေါ် သ၀န်တို တာတွေကို ထုတ်မပြပဲ မောင်နဲ့ပတ်သတ်သမျှတွေကို သိချင်လို့ တောင်းဆိုခဲ့တာတွေကိုလေ မောင်.......နာကျင်နေတယ် မောင်သေသွားမှအေးမယ်ချစ်ရယ်..။
မောင်ခံစားနေရတာတွေကို မကြီးကိုသိစေချင်လိုက်တာ....မကြီး ခံစားနေရတာတွေကိုလဲ မျှဝေပေးချင်နေမိတယ်...မောင်တို့တွေ ဘယ်တော့မှမခွဲတော့ ဘူးနော်....မကြီး ဆီမောင် လာခဲ့မယ်နော်....မောင့်နားမှာ မကြီးကို အမြဲတမ်း ရှိနေစေရမယ် သိလား....ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး မောင်တို့တွေ အမြဲ မခွဲပဲ လက်တွဲ ကြမယ်လေနော်.....မောင့်ဆီ ကို ပြန်လာပါ...မောင့်နားကနေ ဘယ်ကိုမှ မထွက်သွားပါနဲ့တော့နော်...မောင့်ကို အထီးကျန်စွာ မထားခဲ့ပါနဲ့ချစ်ရယ်...။ မကြီးကိုမောင်သိပ်ချစ်တယ်......မောင့် နှလုံးသားထဲမှာ စွဲနေတဲ့ မကြီးရဲ့ အသံ တွေ အပြုံးမျက်နှာလေးတွေကို အမြဲတမ်း သတိရနေပါတယ်.....။ မကြီးကိုမောင် အရမ်းလွမ်းနေတယ်.......အရမ်းချစ်တယ်................။
တောင်းဆု ။ ။
မောင် သိပ်ချစ်ရတဲ့ မကြီး ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့....မကြီးကိုထိခိုက်စေမဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ခံစားပါရစေသား...။
တောင့်တတဲ့ ဆန္ဒ တစ်ခု ။ ။
Posted by paingminoo at 12:56 PM 1 comments
မုန့်လုံးရေပေါ်လေး စားသွားကြပါဦး နော်
Posted by flowerworld at 5:23 PM0comments
ဘူးသီးကြော်လေး စားသွားကြပါဦးနော် ဒီနေ့မီးလေးအိမ်မှာလုပ်စားကြတား-)
Posted by flowerworld at 11:38 PM0comments
Tag အဖြေ (14)
A Po Su - Saung Oo Hlaing
Ranking Signals that HelpaWebsite Perform Well
Veena Malik Towel
ညီမငယ်လိပ်ပြာလေး(ဆု) ညီမလေးသဉ္ဇာ ညခင်းရဲ့လမင်း
meelayzar © 2008. Design By: SkinCorner|Minnyoonthit